SAFIIR WAREEGOOW MAXAAD AHAYD? Axmed Cali Ibrahim Sabeyse
Home WARARKA SAFIIR WAREEGOOW MAXAAD AHAYD? Axmed Cali Ibrahim Sabeyse
Haddaynu iswediino tafsiirka uu salka ku hayo magaca Safiir Wareega waa derejo diploomaasiyadeed waana shakhsi dalkiisu u wakiishay in uu danjire uga noqdo dhowr wadan; waxa kale oo uu noqon karaa qof arrin gaar ah oo muddo dheer soconaysa u igman. danjireyaasha caadiga ah wuu ka sareeyaa oo wuxu la meeqaam yahay wasiirada. Hawsha baaxaddaa leh waxa loogu wakiishayna waa heer aqooneed iyo waayo aragnimo diploomaasiyadeed oo dheer ah.
Madaxweyne dowleed ayaa awood u leh in uu mansabyada noocaas magacaabo; danjiraha sidaa madaxweynuhu u magacaabay isaga oo sita qoraal sharciyeysan, ayuu dalka ama dalalka loo igmaday waraaqa aqoonsiga gacanta ka saara madaxweynihiisa/madaxweynayaasha. Madaama aanu dalkeenu haysan ictiraaf caalamiya wadamada xidhiidhku inaga dhexyeeyo, cidda debedaha aynu u igmanaa waa wakiilo(Liason).
Sidaa darteed ayey gef iyo meel ka dhac innagu tahay in ay axsaabta qaranku magacaabaan ama bixiyaan mansabka Safiir wareega. Marka xisbi qaran ku guuleysto talo dal, ayaa madaxweynaha cusubi magacaabaa safiiro. Sida hadda dhacday, madaxweynaha cusub ee maraykanku, Md. Donald Trump, safiiradii maraykanka gebi ahaanba wuxu ku amray in ay iscacilaadood soo gudbiyaan inta ka horeysa maalinta uu xilka la wareegayo.
Wakhtiyo hore culamada diintu ardeyda waxa bari jireen laba kitaab oo la odhan jirey “Safiinaatul Salaat iyo Safiinatul Najaat.” Inagoon higgaadiiba bilaabin ayeynu kor kaga imaynaynaa bahasha sidan ha laga daayo oo cagta ha loo dhigo.
Previous articleHAL LA QALAY RAQDEEDAA..!!!! WQ Axmed Cali Ibrahiim Sabeyse
Next articleSida looga Kaluumaysto Badaha aynu ka Gaajoonayno (Xogta Dahsoon)